Ny baolina kitra Espaniôla - tantaram-pahamehana momba ny kintana ankehitriny sy kanto
Home Tags Espaniola Diary
Tag: Espaniola Diary
Tongasoa ato amin'ny baolina kitra Espaniôla amin'ny tantaram-pitiavam-pitiavam-bahoana Plus Untold Biographie Tatitry ny kintana Football taloha sy taloha. Eto dia navoakanay ireo mpamaky, ny fahombiazan'ireo kintan'ny baolina kitra amin'izao fotoana izao ary efa nahazatra ny lalao baolina kitra.
Tsy isalasalana fa i Espaina no nanao baolina kitra ary nirehareha ny mpankafy azy. Ny mpilalao ankehitriny sy malaza dia mendrika ny ho ao amin'ny Football Weekend of Fame.
Eny, maro tamin'ireo mpankafy baolina kitra no namaky betsaka momba ny fahaiza-manaony. Nefa vitsy ihany no nandinika ny tantaram-piainany sy ny tantaran'ny fahazazany izay tena mahaliana. Amin'izao fotoana izao, tsy misy adieu intsony, avelao hisintona ny sary nalaina sy ny votoatiny amin'ny voninahitra rehetra.
Mpanova LifeBogger - Daty efa namboarina: 15 septambra 2020 0
LB dia manolotra ny tantaran'ny tompon'andraikitra amin'ny Football iray izay nomena anarana hoe "El Maestro". Izy io dia fitantarana feno momba ny Quique Setien Childhood Story, Biography, Family Facts ...
fihetseham-po - Daty efa namboarina: 18 septambra 2020 0
Ny LB dia manolotra ny tantara manontolo momba ny mpilalao baolina kitra izay fantatra amin'ny anarana hoe "Traffic Warden". Ny Unai Emery Childhood Story Plus Biography ...